Rifletti, oggi, se vedi odio nel tuo cuore | Ilblogdellafede
Chee echiche taa ma ọ bụrụ n’ịhụ n ’obi asị
Nyem isi Jọn Baptist n’ebe a n’elu efere. Matiu 14: 8
Uff, kedu ihe ọjọ ị ga-ekwu ma ọ dịghị ihe ọzọ. Jọn Baptist bụ onyepụrụ isi ya na arịrịọ nke Salome, nwa nwanyị nwanyị nke Herodias. Jọn nọ n'ụlọ mkpọrọ maka ịgwa Herọd eziokwu banyere alụmdi na nwunye ya, Herodias kpọkwara John asị. Herọd wee mee ka nwa ya nwanyị gbaa egwu n'ihu Herọd na ndị ọbịa ya. Obi tọrọ Herọd ụtọ nke ukwuu nke na o kwere Salome nkwa ruo n'etiti ọchịchị ya. Kama, arịrịọ ya bụ maka isi Jọn Baptist.
Ọbụlagodi n’elu nke a bụ arịrịọ siri ike. Ekwere Slome nkwa rue n’etiti ochichi ma, karie ariri, maka onwu nke nwoke di nma ma di nsọ. N'ezie, Jizọs kwuru okwu banyere Jọn na ọ dịghị onye ọ bụla nke nwaanyị mụrụ nke ka ya ukwuu. Yabụ kedu asị niile Herodias na nwa ya nwanyị mere?
Ihe a jọgburu onwe ya na-egosi ike iwe dị n'ụdị ya kacha njọ. Mgbe iwe tolite ma tolite, ọ na - ebute oke egwu, ka ọ bụrụ igwe ojii na - eche echiche na ebumnuche mmadụ. Kpọasị na imegwara nwere ike iri mmadụ mmadụ ma duga ya na mmechuihu zuru oke.
N'ebe a, Herọd na-agbakwa ama banyere enweghị ezi uche. A na-amanye ya ime ihe ọ na-achọghị ime n'ihi ụjọ na-atụ ya ime ihe ziri ezi. Ọ na-enwe obi ọjọọ site na ịkpọasị n'ime obi Herodias, n'ihi nke a, ọ nyefere onwe ya maka ogbugbu John, onye ọ hụrụ n'anya ma nwee mmasị ige ntị n'ezie.
Anyị na-agbakarị mmụọ nsọ nke ezigbo ndị ọzọ. Mana, na nke a, anyị achọpụtala na anyị nwere ike ‘bụrụ mmụọ nsọ’ n’ụzọ dị iche. Anyị kwesịrị iji akaebe nke ogbugbu nke John dịka ohere iji lelee ọgụ ndị anyị na-enwe na iwe, iwe na karịa ịkpọasị niile. Atekpọasị bụ oke mmụọ ọjọọ nwere ike ịmịcha ma mebie ọtụtụ mbibi na ndụ anyị na ndụ ndị ọzọ. Ekwesịrị ikwupụta ma merie mmalite nke agụụ ihe ọjọọ a.
Chee, taa, ma ọ bụrụ n’ịhụta ịkpọasị n’obi gị. Have jirila iwe ma ọ bụ kpasuo gị iwe na-agaghị apụ? Ọchịchọ ahụ ọ̀ na-eto ma na-emebi ndụ gị na ndụ ndị ọzọ? Ọ bụrụ otu a, kpebie hapụ ya ka ọ gbaghara. Ọ bụ ihe ziri ezi ime.
Onye-nwe, nye m amara m chọrọ inyocha n’ime obi m ma hụ n’omume iwe, iwe na ịkpọasị ọ bụla. Biko sachapụ m ihe ndị a ma mee ka m nwere onwe m. Jesus m kwere na gị.
Ihe edepụtarantụgharị uche kwa ụbọchị
← Na post gara aga Gara aga post:Ọgọst 1, nraranye nye Sant'Alfonso Maria de'Liquori
Ọzọ Post → Post ozo:Gini mere Chineke jiri nye anyi abù oma? Kedụ ka m ga - ebido kpee abụ ọma?